Feature Article Archives - Arsenal Myanmar News
အာတေတာ ဖြေရှင်းရဦးမယ့် ပြဿနာတစ်ရပ် (သို့မဟုတ်) ဝီလီယံ
By AM Editor| 2020-11-15T10:17:28+00:00	November 15th, 2020|Feature Article|
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဝီလီယံဟာ အာဆင်နယ်အတွက် ပထမဆုံးပွဲစဉ်မှာ ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ လက်ခုပ်သံကို ရယူခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ အသက် (၃၂) နှစ်သားဟာ ဖူလ်ဟမ်အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ရာသီအဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ဖန်တီးမှု (၂) ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သလို လာကာဇက်ရဲ့ သွင်းဂိုးကလည်း သူ့ရဲ့ ကန်ချက် လျှံထွက်လာမှုကနေတဆင့် ရရှိခဲ့တာပါ။ [...]
Comments Off on အာတေတာ ဖြေရှင်းရဦးမယ့် ပြဿနာတစ်ရပ် (သို့မဟုတ်) ဝီလီယံ
အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားစိတ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ အသင္းနဲ႔ ကစားသမားၾကားက ေျမစာပင္ ပရိသတ္ေတြ
By AM Author| 2020-06-21T10:52:41+00:00	June 21st, 2020|Feature Article|
အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ကိုဗစ္ကာလေနာက္ပုိင္းေျခစြမ္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြ မရပ္နားခင္ မတ္လထဲအထိ ဆက္တုိက္ဆြဲခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ရွဳံးပြဲမရွိခဲ့တဲ့ ေျခစြမ္းနဲ႔ ဆီနဲ႔ ေရ၊ ေရႊနဲ႔ ေၾကး... ဦးဘဂ်မ္းရဲ႕ ကာတြန္းေတြထဲမွာ ဖတ္ဖူးတဲ့ စကားလုံးနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ နံ႔သာဆီနဲ႔ သုနကၡမိလႅာျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနေအာင္ ဘာေတြ [...]
Comments Off on အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားစိတ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ အသင္းနဲ႔ ကစားသမားၾကားက ေျမစာပင္ ပရိသတ္ေတြ
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ Gunner ဖြစ်ခဲ့လျှင်…
By AM Editor| 2020-06-01T12:54:06+00:00	June 1st, 2020|Feature Article|
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီ ဇန်နဝါရီလမှာ ဆီဗီလာအသင်းကနေ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦးကို အာဆင်နယ်က ထိုစဥ်က အသင်းရဲ့ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၁၇ သန်း ဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူ့နာမည်က ဟိုဆေး အန်တိုနီယို ရေးယက်စ်။ အသက် ၂၀ အရွယ် စပိန်သားလေးအတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲပုံ စေ့စပ်တဲ့ [...]
Comments Off on တစ်ကြိမ်တစ်ခါ Gunner ဖြစ်ခဲ့လျှင်…
ဒေးဗစ်လူးဝစ်ကို စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးသင့်သလား… ?
By AM Editor| 2020-05-31T11:35:56+00:00	May 31st, 2020|Feature Article|
အာဆင်နယ်အသင်း ဒေးဗစ်လူးဝစ်ကို စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးမတိုးကတော့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ ဘယ်လောက်အထိ အဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့အပေါ်ပဲ မူတည်နေပြီလို့ပဲ ဆိုရပါမယ်။ ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းအရ အချွေတာဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုသာ အမြဲရွေးချယ်တတ်တဲ့အသင်းဟာ ဘရာဇီးလ်သားရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာတော့ မလိုအပ်ဘဲ အပိုကုန်ကျမှုတွေများခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၃၃)နှစ်အရွယ် ကစားသမားအတွက် တရာသီစာ ကုန်ကျစားရိတ် ပေါင် (၂၄)သန်းအထိ ရှိခဲ့တာပါ။ မနှစ်ကနွေအပြောင်းအရွှေ့မှာ ဝါရင့်ကစားသမားတဦးကို [...]
Comments Off on ဒေးဗစ်လူးဝစ်ကို စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးသင့်သလား… ?
By AM Editor| 2020-05-27T13:38:23+00:00	May 27th, 2020|Feature Article|
မိုးတွေရွာပြီ.. ဟုတ်ပါ့... ရွာပြီပေါ့ မိုးရယ်။ မိုးအေးအေးလေး တဖွဲဖွဲ ကျနေချိန် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က အကြောင်းလေးတွေ ပြန်တွေးနေမိတယ်။ ဘေးနားမှာ ချထားတဲ့ ကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ကို အငွေ့မှုတ်ထုတ်ရင်း တစ်ငုံလောက် မော့လိုက်ပြီိး အတိတ်ဆီကို စိတ်အလျင်က ပြေးသွားနေမိတယ်။ " ဦးလေး အင်တာမီလန်နဲ့ပါးမားပွဲ အခွေလေးရပြီလား။".. ခွေဆိုင်မှာ [...]
Comments Off on ဟိုစဥ်အချိန်တွေ တမ်းတမက်မော
၈၉ ခုနှစ်က သမိုင်းဝင်ပွဲတစ်ပွဲ
By AM Editor| 2020-05-26T13:26:31+00:00	May 26th, 2020|Feature Article|
အချိန်က ၁၉၈၉ မေလ ၂၆ ရက်။ အင်္ဂလန် ဘောလုံး ပရိသတ်များအတွက် တကယ့်ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေ့။ တိတိကျကျပြောရရင် လီဗာပူး ပရိသတ်၊ အာဆင်နယ် ပရိသတ်တွေအတွက် အင်္ဂလန် ပထမတန်း အမှတ်ပေးဖလား (ယခု ပရီးမီးယားလိဂ်) အဆုံးအဖြတ် ပွဲစဥ် ၃၈ နေ့။ ပွဲစဥ် ၃၇ [...]
Comments Off on ၈၉ ခုနှစ်က သမိုင်းဝင်ပွဲတစ်ပွဲ